Nezvedu - Nanjing Huade Storage Equipment Kugadzira Co, Ltd.
Muna 2009, HUADE yakavaka fekitori yayo nyowani inopfuura 66,000 mativi emamita muNanjing Jiangning Science Park. Iko kune zvishanu zvehunyanzvi zvirimwa uye zvinopfuura mazana maviri seti yemidziyo uye yekushandisa.
Muna 2012, HUADE yakagadzira nekugadzira yekutanga yakazara otomatiki yakakwira-sisitimu yekuchengetedza Master shuttle system (zvakare inodaidza inotakura uye shuttle system).
Chirimwa chitsva chekuyedza chemamita makumi mana kukwirira kwenzvimbo dzakazara dzekuchengetedza chiri kuvakwa mugore ra2020.
Kugovera nevatengi vedu zvakangwara, zvinodhura, zvinoshanda zvakanyanya uye zvakachengeteka mhinduro, uye kugadzira kukosha kwakawanda kumatura evatengi vedu.
Kupa yakanakisa mhando ye otomatiki ekuchengetera masisitimu uye akajairwa racking masisitimu kune vatinoshanda navo uye nevaparidzi.
Kugadzira Hunhu hweHUADE
Kukwana: isu tinokwanisa kugadzira yakazara yakazara yekuchengetedza racking masystem, otomatiki ekuchengetedza masystem.
Kugadziridza uye kusika ndiko kunobva kukura kweHUADE. Isu tinogara tichipa epamberi, echizvino zvigadzirwa
Ndiyo nheyo ye HUADE. Masisitimu edu ndiwo akachengeteka zvakanyanya uye zvirinani sarudzo kune vatinoshanda navo, vanogovana uye vatengi nekuda kwesimbi yemhando yepamusoro, yakanatswa kuverenga uye inoshanduka dhizaini.